Microsoft Office Professional Plus 2013 Activated x86,x64 ( စာစီစာရိုက်သမားတွေအတွက် တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ Microsoft Office 2013 ) - ဇော်မင်းသန်း ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Microsoft Office Professional Plus 2013 Activated x86,x64 ( စာစီစာရိုက်သမားတွေအတွက် တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ Microsoft Office 2013 )
စာစီစာရိုက်ကို လေ့လာနေသူတွေအတွက် Microsoft Office Professional Plus 2013 ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအချို့ ကလည်း အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုပြီး တောင်းလာတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Microsoft Office လူတိုင်း သိပြီးသား ပဲဖြစ်လို့ သိပြီး စာအရှည်ကြီး မရးတော့ပါဘူး။ အသုံးမပြု တတ်သေးဘူး ဆိုရင် ဒီလင့်မှာ (Microsoft Office Word 2013 ကို လေ့လာအသုံးပြုနည်း မြန်မာလို Ebook) ကို ၀င်ရောက် ဒေါင်းယူပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Microsoft Office Professional Plus ကို Activated အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Install လုပ်နည်းကို အောက်မှာ ပုံနှင့်တကွ ပြထားပါမယ်။ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေ အားလုံးကို အောက်ကလင့်မှာ ၀င်ရောက်ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Download Microsoft Office Activater KMSpico
Download Microsoft Office Professional Plus 2013 x86,x64
အပေါ် က ၂ခုကို ဒေါင်းပြီးရင် မိမိ ကွန်ပျူတာမှ Antivirus ဆော့ဝဲလ်ကို ခန ပိတ်ထားပေးပါ။ ပြီးရင် Microsoft Office Professional Plus_x86,x64 ရဲ့ Rar ဖိုင်ကို ညာကလစ်ပြီး Winrar နဲ့Extract လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အောက်ကပုံလို Setup.exe ဖိုင်ကို ကလစ်ပြီး Install လုပ်ပါ။
စတင် Install ပြုလုပ်နေပါပြီ။ အောက်ကပုံကို ဆက်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီအဆင့်ပြီးသွားရင်တော့ ခုနက အပေါ်က ဒေါင်းထားတဲ့ Microsoft Office Activater KMSpico ကို ညာကလစ်ပြီး Winrar နဲ့ Extract လုပ်ပါ။ ပြီးရင် Install လုပ်ပါ။
ဒီအဆင့်ပြီးရင် တော့ မိမိရဲ့ Microsoft Office Professional Plus 2013 ကို Activated အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ဒီလောက်ဆို အားလုံး နားလည်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နည်းပညာ အားနည်းသမားတွေ အဆင်မပြေမှာ စိုးလို့ ပုံနှင့်တကွ သေခြာ ရှင်းပြထားပေးတာပါ။
Activator cannot be downloaded. The link is disable due to Google's terms and condition. Could you please upload again. Appreciate if you could do that on mediafire.
25 February 2015 at 06:16
Activator cannot be downloaded.